Igama elinqamlezileyo, Ngena kwaye wonwabe kwi-emulator
Igama eliphambeneyo. Ngoku siza kukubonisa yonke into ekufuneka uyazi ukuze uqonde lo mdlalo mhle. Ukusuka kwintsingiselo yayo ye-etymological, imvelaphi yayo, izibonelelo zayo, iimodeli zepuzzle ezikhoyo kunye nezicwangciso zokusombulula ngokukhawuleza kodwa ngokukhawuleza.
Igama eliphambili: Idlalwa njani inqaku ngenqaku 😀
Ukwenza i Igama eliphambeneyo online simahla, kufuneka nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
Nje ukuba ungene kwisiza, umdlalo uza kuboniswa kwiscreen. Kuya kufuneka kuphela khetha ulwimi kunye nodidi oluthandayo. Phakathi kweendidi onokuzifumana zezi: Iziqhamo, iikhompyuter, izilwanyana Amazwe, Imifuno kunye noMculo
Ngoku, uya kufumana amaqhosha aluncedo. Ngaba "Yongeza okanye susa isandi", Nika iqhosha"umdlalo"Kwaye uqale ukudlala, unga"Nqumama"kwaye"Qalisa kwakhona"Nawuphi na umzuzu, Yandisa ubungakanani bescreen okanye enye Phuma kumdlalo.
Iyakwazi ukudibanisa zonke iziqwenga ngendlela yokuba umfanekiso owukhethileyo wenziwe.
Emva kokugcwalisa umdlalo, cofa "Phuma kumdlalo" ukwenza amanye amagama aphambili.
¿Ukusombulula njani igama eliphambeneyo?🖊
Ngoku sikubonisa amaqhinga asibhozo anokukunceda uqhubele phambili kwindlela yakho yokwenza iipuzzle zegama:
1- Funda nganye nganye yazo
Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa uqala i-crossword yile funda umkhondo ngamnye ukusuka phezulu kuye ezantsi kwaye ufake nezisombululo ezilula. Kuyacetyiswa ukuba uqhubeke kwicala elithile. Ukusuka ekhohlo uye ngasekunene okanye ngokuchaseneyo kwaye uqhubeke ngokuhla usenyuka ngokufanelekileyo. Unokuqiniseka ukuba urekhode isisombululo ngasinye esaziwayo.
Ukuba, kwelinye icala, kufuneka ukhethe imibuzo ngokungakhethiyo kwaye uyinqamle, mhlawumbi ezinye iibhokisi ezilula zidlula phambi kwakho ungakhange uqaphele.
Xa ugqibile lo mjikelo wokuqala wegama elinqamlezileyo, kuya kufuneka ngoku uqhubele phambili nakwimibuzo enzima ongakhange ukwazi ukuyiphendula. Oku kwenza ukuba ukuqikelela kube lula kwezi zikwere kwaye ngokulula ungaqala umjikelo wesibini.
Ngoku kulula ukuphendula imibuzo enikezela kuphela iimpendulo ezininzi ezinokubakho. Ukusebenza njengomzekelo, ukuba ujonge isimelabizo somntu siqu esinoobumba aba-3 , usengakhetha phakathi KWAM, WENA, US, njl.
2- Sebenzisa iziphawuli
Ukuba kusekho iimpendulo ezininzi kumbuzo okanye, ngokubanzi, awuqinisekanga ngokukodwa ngempendulo, ngokungenisa igama ngokuntywila ngosiba. Ukuba, njengoko uqhubeka nokusombulula iphazili, kufumaneka iileta ezithile kwigama olifunayo, uya kubona ukuba ingcinga yakho yokuqala ichanekile okanye hayi.
Ngamanye amaxesha kulungile ukulinda de kunikwe iileta ezininzi ngegama elithandabuzekayo. Ukuba inye kuphela, njengo-Y nayo, kunokwenzeka ukuba iphezulu kakhulu ukuba zinokwahluka ezininzi zisenokusetyenziswa. Yintoni eza kuba ngcono ukuba ulinde ithutyana. Ukuba uqinisekile ngenxalenye yokuba igama olifunayo lifanelekile, unokulilandelela ngokufanelekileyo.
Ukuba ubambekile kwilizwi ixesha elide kwaye awunakho ukuya phambili kwi-crossword, akufuneki woyike Thatha ikhefu. Emva koko beka imfihlakalo ecaleni, coca intloko wenze enye into.
Kuyamangalisa ukuba, emva kwexesha elithile lokufunda umbuzo kwakhona, ngesiquphe Unesiphumo esothusayo apho wawubanjiswe khona ngaphambili. Into yexesha ayibalulekanga xa usombulula igama eliphambeneyo. Eyona nto iphambili kukuba umceli mngeni uyonwabisa.
4- Khangela ibali elingaphandle
Ayisiyo nganye ipuzzle yamagama anesihloko esithile. Kaninzi ukuba isizathu okanye isihloko sinikezwe kwintloko, unokulindela ukuba icandelo elithile lemibuzo kunye neempendulo zijolise ngqo kuloo nto.
Ke oku akuthethi ukuba igama ngalinye lisekelwe kuye. Ngokukodwa, amagama amancinci okugcwalisa, anje ngezimelabizo, izifinyezo, kunye nezinye ezinje, aziyi kusekelwa kwisihloko. Kodwa ukuba kukho umxholo weKrisimesi okanye wobusika entlokweni, umthi oneeleta ezi-5 kunokwenzeka ukuba ube yi-MOTO kune-OAK.
Oku kuluncedo ngakumbi ukuba awunakho ukuqhubela phambili ngombuzo ngeempendulo ezininzi ezinokubakho. Ke gcina isihloko engqondweni, siyakukukhokela kwindlela elungileyo.
5- Khangela amagama kwezinye iilwimi
Los amagama anqamlezileyo zihlala zisetyenziselwa ukukhangela amagama kwiilwimi zasemzini. Nangona kunjalo, unokuqiniseka ukuba ngokubanzi alusoze lube nzima ukuba lube sisichazi-magama. Uninzi lwexesha, ayisiyiyo yokufunda ulwimi ngokugqibeleleyo ukuze usombulule umbuzo. Endaweni yoko, ibalasele Amagama amancinci anokuthi afike kulwimi lwakho kusetyenziswa ulwimi ngokubanzi. Qiniseka ukuba unonobumba abathile begama olifunayo, kuya kuba lula ukuthelekelela.
6- Fumanisa ukuba loluphi uhlobo lwegama olifunayo
Ngamanye amaxesha kuyenzeka Sebenzisa uphawu lombuzo ukubona kwangaphambili ukuba yeyiphi na indawo yengxoxo ekufuneka isisombululo sihlelwe. Oku kukunika ithuba lokuba ubhale isiphelo ngokukhuselekileyo. Xa befuna isenzi, bahlala bephela ngendlela efanayo. Kuyafana ngokufanayo amagama amaninzi. Ukuba ukhangela isininzi segama, ngokuqinisekileyo liya kuphela -i okanye -s.
Kwelinye icala, ungayisebenzisa ukufaka oonobumba bokugqibela begama, Nokuba awuqinisekanga ngegama lonke. Kwelinye icala, oonobumba abambalwa ekupheleni kwegama banceda ukuqikelela amagama amaninzi awela ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ukuba awuqinisekanga ngesiphelo esifanelekileyo, ngenisa ngepeni okwangoku.
7- Iintsingiselo ezininzi zegama
Ngemibuzo ethile kufuneka ujonge ngaphezu kwesinye. Ewe mhlawumbi cela ngokwakho ukuba ube mbumbulu. Okokuqala, ngenxa yokuba igama kulo mbuzo linokuba neentsingiselo ezahlukeneyo, ukuze ube ngumzekelo eBanco. Ukuba uceliwe ukuba wenzani ebhankini, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba inokuthetha zombini ibhanki yesihlalo kunye nebhanki yombutho wezemali.
Emva koko impendulo inokuthi "hlala apho" Kulungile "tyala imali ".
Kukwakhona ukuba inqaku liyaqondwa ngokuchanekileyo okanye ngomzekeliso. Ukucamngca ngekona ngamanye amaxesha kuyimfuneko apha. Ungasoloko usoloko uthatha eyona ntsingiselo yamagama, kodwa zama ukuthathela ingqalelo amanye amanqanaba. Ukusebenza njengomzekelo, ukuba ubuzwa indlela eya eRoma, ngokuqinisekileyo akufuneki uchaze isitalato esithile okanye indlela, kodwa impendulo inokuba YONKE, ngokwentetho "Zonke iindlela zikhokelela eRoma".
8- Xa kungekho nto inceda ...
Ukuba ngoku uzilandile zonke ezi ngcebiso kwaye awungekhe uqhubeke namagama athile, akukho sizathu sokubuza iingcebiso ezithile. Bayibenjalo cela ingcebiso kubahlobo abathile okanye abantu bakudala obaqhelileyo okanye basebenzise incwadi yesiko okanye yedijithali.
Yiba njalo izichazi-magama, izichazimazwi, Omnye wabo mhlawumbi usekhaya. Nangona kunjalo, ukuba uhamba kwaye usombulula igama eliphambeneyo kwindawo eyahlukileyo, unokukhetha izibonelelo ezininzi ezikwi-Intanethi zoncedo lwephazili.
Siyathemba ukuba olu lwazi luluncedo kuwe. Kwaye, ukuba uziva ulungile ngoku, silindele ukuba uqale wenze eyakho igama eliphambeneyo.
Yintoni igama eliphambeneyo?📚
Los amagama anqamlezileyo Zezinto zokuzonwabisa ezenziwe luthotho lwezikwere ezingenanto ekufuneka ugqibezele umdlalo. Fumana igama ngalinye usebenzisa iingcebiso zasimahla. Njengokuba kugqityiwe amagama athile, oonobumba abathile abavela kwamanye amagama bavela ngokuzenzekelayo, besenza isisombululo lula. Kuqheleke kakhulu kumaphephandaba nakwii-gazette kwaye, ke, ziyaphumelela kwi-Intanethi.
La Ubunzima be-crossword butshintsha ngokwefomathi kunye nenani lamagama. Ngamagama amancinci aweleyo kwaye amagama angaphezulu komdlalo unamathuba amakhulu okuba umdlalo ube nzima. Ukongeza koku, inqanaba lobunzima litshintsha ngokwesihloko segama eliphambili, ke ukuba ufunda ukudlala, khetha isihloko osithandayo kunye nolwazi ngaso.
Amagama aphambili okwangoku enye yezinto zokuzonwabisa ezithandwa kakhulu, nangona belahlekelwe ngumhlaba phambi kweminye imidlalo efana sudoku. Akukho phephandaba okanye iphepha-ndaba lombuso elingenalo icandelo lokuzonwabisa elibandakanya umqobo omnye okanye nangaphezulu. Kodwa yaqala ngaliphi ixesha?
Imbali yamagama aphambeneyo🤓
El igama lokuqala Esikwaziyo kwenzeka ngoDisemba amashumi amabini ananye, ishumi elinesithoba lamakhulu alishumi elinesithathu, ngexa iphephandaba NgeCawa kwiHlabathi laseNew York uprinte iphazili ebizwa ngokuba yi "igama eliphambeneyomsgstr ", Iphuhliswe ngu UArthur Wynne, umbhali-mbali oliNgesi waseLiverpool. Iphazili yayibetha kwangoko noluntu kwaye yaba ngumtsalane ngeveki kupapasho.
Ngaphandle kwempumelelo yayo, Ihlabathi yayilelona phephandaba lalipapasha le phazili kude kube ngo-1924, Ngelo xesha umpapashi wokuqala wakhupha ingqokelela epheleleyo yamagama aphambili apapashwe ngokuhamba kwexesha liLizwe, kwifomathi yencwadi. USimon & uShuster isungule ubudenge obutsha obuya kuba ngomnye wabapapashi abakhulu emhlabeni.
Ibhodi yamagama- Uhlobo olulodwa lwesicatshulwa esiqukethe iseti yoonobumba abachazwe kwisikwere 'igridi', ukuze la magama afanayo afundwe ngokuthe nkqo nangokuthe nkqo, abuyela kumaxesha amandulo.
Oyena khokho mdala owaziwayo wegama eliphambeneyo wafunyanwa kwisixeko saseThebes engcwabeni lombingeleli omkhulu uNeb-wenenef otyunjelwe loo msebenzi ngonyaka wokuqala wolawulo lukaRamses II, ufaro wobukhosi be-XNUMX (XNUMX-XNUMX lamawaka Amakhulu amabini phambi kukaKrestu). Kwicala lasekhohlo lepaseji ekhokelela kwigumbi elingaphakathi lengcwaba, a ilitye elikhulu ekubhalwe kulo imifanekiso yabantu kunye noluhlu lweehieroglyphs.
Isicatshulwa siqulathe kuphela uthotho lwemithandazo efanele ukudunyiswa malunga nothixo uOsiris, umkhuseli womfi, njengoko yayiqhelekile ngelo xesha. Kaninzi indlela ii-hieroglyphs ezazicwangciswe ngayo zamangalisa abembi bezinto zakudala. Iyonke ilishumi elinanye imigca ethe tyaba. Kanye embindini wabo, ikholamu ibhalwe uphawu ukubonisa ukuba iihieroglyphs, ezifundwayo ngokuthe nkqo, nazo ziyavakala.
Ukusukela ngoko iye yaqhubeka ikhula kuwo wonke umhlaba, iba ingabalulekanga kuyo nayiphi na iphephandaba.
Iindidi zamagama aphambili
Amagama aphambeneyo aneentlobo ezahlukeneyo. Ezi zinokuhlelwa njenge-universal, iconic, nominal, negative, ngolwandiso, nangokuqikelela. Kumagama aphambili kwinqanaba "elilula", inqanaba inkcazo yegama, kulandele ukuvumisa. Kulawo kwinqanaba "elinzima kakhulu", imeko ibuyiselwa umva: Inkcazo ngokuvumisa ilandelwa ngegama.
Nangona kunjalo, amagama aphambili aboniswa ngokwendidi ezahlukeneyo. Makhe sibone ukuba zintoni:
Igama eliphambili elimhlophe
Luhlobo lwegama eliphambeneyo apho akukho zikwere zimnyama, apho umntu othabatha inxaxheba kufuneka afumane indawo akuyo.
Umguquleli wegama elinqamlezileyo okanye iilwimi ezimbini
Eli gama liphambeneyo lijolise ekufundeni ulwimi olutsha.
Igama eliphambeneyo Uluhlu
Luhlobo lwesimo apho ibhokisi nganye kufuneka ifakwe khona ilungu endaweni yonobumba omnye.
Igama eliphambeneyo kunye nomlingiswa
Olu hlobo lwe-crossword luthandwa kakhulu namhlanje. Iqulathe ifoto yomlinganiswa apho enye okanye uninzi lweenkcazo iyahambelana negama okanye iifani ezifanayo.
Igama eliphambeneyo Ngobuchule
Kule ndlela inzima sebenzisa isivakalisi esifihla imiyalelo ukwakha okanye ukufumanisa isisombululo phakathi kwamagama ebinzana. Kuqheleke ngokukodwa e-UK apho i-crossword evela kwiThe Times ibonakala.